APEC: TI 15mW ရပ်တည်ချက်ဖြင့်အတူ AC-DC chip ကိုအောင်နောက်ပိုင်းတွင်ထင် - Infinite-electronic
နေအိမ်သတင်းAPEC: TI 15mW ရပ်တည်ချက်ဖြင့်အတူ AC-DC chip ကိုအောင်နောက်ပိုင်းတွင်ထင်
"တန်ခိုး-ထောက်ပံ့ရေးအရွယ်အစားကျုံ့အနေဖြင့်ဤစက်ပစ္စည်းမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ Ultra-အနိမ့်ဆူညံသံအကြားအကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာရရှိ, အချို့မျှတမှုနှင့်အတူမလုပ်ပဲ - ကတဦးတည်းကြီးမားသော capacitor မပေမယ့်
ယင်းကိုခေါ် TPS7A78ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ပါဝါဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲအဓိကဗို့အား၏ '' ချောင် '' အများကြီးမှအပှေါကြိမ်နှုန်းမှာတစ်ဦးက Capacitor (ဒီအမှု၌ '' CS ') ၏စီးရီး impedance ကိုအသုံးပြုသည့်ဆယ်စုနှစ်အရွယ် capacitive dropper technique ကို, (အနည်းဆုံးအပေါ်ကိုတစ်ဦးအလွန်အဆင့်မြင့်ယူဖြစ်ပါသည် တစ်ခုကံဆိုးပါဝါအချက်၏စျေးနှုန်း) ။
ဒီအဟောင်းကိုစိတ်ကူး၎င်းထိုသို့ထိရောက်မှုတိုးမြှင်နှင့် Control On-သေဆုံးအဓိက Rectifier Front-အဆုံးနှင့်အတူစည်းမျဉ်းကထပ်ပြောသည် -4feeds သောရေလှောင်ကန်က Capacitor (Cscin), တက်ဖြည့် - step-up, 1 မှ capacitor ဗို့ခြေလှမ်း-Down switched output ကိုလက်ရှိ။ က output တွင်ရိုးရာ LDO linear ထိန်းညှိသည်။
"CS ၏ reactance အဆိုပါ rectified AC အဗို့အမြောက်အများ capacitor [Cscin] ကိုအားသွင်းဖို့အသုံးပြုကြောင်းလက်ရှိအားသွင်းအများဆုံး AC အသတ်မှတ်" ကုမ္ပဏီကပြောကြားသည်။ "ဒီ 4: 1 switch ကိုဦးထုပ်ဇာတ်စင် 1 / 4th အားဖြင့် input ကိုကလက်ရှိလျှော့ချ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါမြင့်တက် resistors [ရူပီး] device ကိုမှ inrush လက်ရှိကန့်သတ်အသုံးပြုသည်။ ရူပီးကိုလည်းတီဗီ [ယာယီဗို့အားနှိမ်နင်း] သို့မဟုတ် MOV [သတ္တု-အောက်ဆိုဒ် varistor] နှင့် တွဲဖက်. မြင့်တက်ရေစီးကြောင်းကနေ Device ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ "
125 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ -40
output 1.25 - 5V 500mW max ကို
3.4V နှင့် 5V အကြားထွက်ရှိမှုနှင့်အတူတက်ကြွစွာ Rectifier င်း၏ပါဝါကို, လေလွ minimize လုပ်ဖို့ (ဝန်နှင့်အပူချိန်နှစ်ခုလုံးကျော်) ကို LDO ဖြတ်ပြီးတစ် 600mV တစ်စက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထိန်းချုပ်ထား - ဒါ output ကို 4V သတ်မှတ်ထားလျှင်, Rectifier 4.6V ဖြစ်ပါတယ်သေချာ ရေလှောင်ကန် / LDO input ကိုအပေါ်ထိန်းသိမ်း။
3.4V နှင့် 1.25V အကြား output ကို voltages ကိုများအတွက်တက်ကြွစွာ Rectifier ရေလှောင်ကန်ပေါ်တစ်ဦး fixed 4V ထိန်းသိမ်းထားသည်။
over-ဗို့အား (> 5.75V) ကို output ကိုအပေါ်တွေ့ရှိလျှင် - လေးလံသောဝန်ရုတ်တရက်ဥပမာ, output ကိုမှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည် - ထို LDO input ကိုက Capacitor အပေါ်ပိုလျှံကိုအသုံးပြုထားပြီးသည်အထိတစ်ဦးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး circuit ကိုပု switched-capacitor အပိုင်းရပ်လိုက်နိုင်သည်။ အဆိုပါ 5.75V တံခါးခုံပုထိန်းချုပ်ထား Rectifier အဆိုပါ LDO input ကိုအပေါ်ထိန်းသိမ်းပါလိမ့်မည်သော 5.6V နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ် - ဤက output 5V သတ်မှတ်ထားသည့်အခါအရေးယူသို့လာရန်အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။
ac မရရှိနိုင်သောအခါ, ရေလှောင်ကန်က Capacitor ကွန်နက်ရှင် pin ကိုသို့ DC အရင်းအမြစ်မှအာဏာကိုထောက်ပံ့ဖို့ရွေးစရာတခုရှိတယ် - ဒီ option ကိုလှည့်ပတ်အနည်းငယ်အတွက်အသိပေးချက်များအတွက်ဒေတာစာရွက်စစ်ဆေး - output ကိုတက် voltages နှင့်အတူဤသာအသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျတဦးတည်းသော 3.3V ရန်။
output လက်ရှိကန့်သတ်အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး, ကျောထောက်နောက်ခံပြု-တက် Over-ဝန်သို့မဟုတ် Short-circuit ကိုဆက်လက်သငျ့သညျဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း chip ကိုအသုံးပြု powered တစ် mirocontroller များ၏အကျိုးအတွက်နှစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်တံသင်ရရှိနိုင်နေသောခေါင်းစဉ်: ပါဝါ-မလွဲမသွေ input ကို AC ပါဝါကျဆင်းလျက်ရှိသည်ကိုပြသသည့် Open-ယိုစီးမှု pin ကိုဖြစ်ပါတယ်။ power-ကောင်းသော (ကကျရောက်သည့်အခါ 2% hysteresis နှင့်အတူ) က output က၎င်း၏ရည်ရွယ်တန်ဖိုး 92% အထက်ထမြောက်တော်မူပြီကွောငျးဖျောပွထားတဲ့ Open-ယိုစီးမှု pin ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Over-ဝန်တစ်အပူပြီးနောက်က output device ကိုလုံလုံလောက်လောက်အေးတခါပေါ်ပြန်လှည့်နေသည်။
အကြွင်းမဲ့အာဏာ mazimum voltages ကိုရေလှောင်ကန်ပေါ် ac သွင်းအားစုအပေါ် 30V နှင့် 30V များမှာ - အဆုံးစွန်သော DC နှင့်အတူ်ရောက်သည်အခါ, 24V မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ပေမယ့်။ 3A အထိခေတ္တ ac သွင်းအားစုများမှရေလှောင်ကန်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မက်စ်အထွက်) ဝက်အတွင်းအပြည့်အဝ-တံတား, 60mA အတွက် 120mA ဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှလျှောက်လွှာ DC ကပါဝါဖြေရှင်းချက်မှပုံမှန် AC အမတူဘဲ "TI သည်နှင့်အညီ, ဘယ်မှာ, စမတ်မီတာ powering ဖြစ်ပါတယ်, အ TPS7A78 အဲဒါကိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်တမ်အောင်နေဖြင့် E-မီတာ application များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်ထားတဲ့ပြင်ပသံလိုက်လိုအပ်ပါတယ်ပါဘူး။ ထိုသို့သောအီလက်ထရောနစ်မီတာအဖြစ် applications များကတောင်းဆို IEC 61000-4-8 စံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ "
App တစ်ခုမှတ်စု, 'ဦးထုပ်က e-မီတာအော့ဖ်လိုင်းထောက်ပံ့ရေး drop265Vac - ', 90 အနေဖြင့် 3.3V (50mA နိမ့်ဆုံး) ကယ်တင်တတ်၏တဲ့ circuit ကိုဖော်ပြသောရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိရောက်မှု 50mA ထွက်အတွက် 120Vac မှာ 53% ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအစ "ရိုးရှင်းတဲ့ nonmagnetic AC / DC power supply လုပ်လုပ်နည်း။ " ရေတိုဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခြင်း, TPS7A78 အသုံးပြု. လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ် "
TPS7A78 တစ် 14pin,5x ကို 6.5mm TSSOP အတွက်လာပါတယ်။